२०७६ भदौ २३ सोमबार ११:०७:००
बीबीसी । सेप्टेम्बर दुईमा ट्रान्सफर विन्डो बन्द भइसकेको छ । ट्रान्सफर विन्डो बन्द भएसँगै महिनौंदेखिको नेयमार बार्सिलोनामा आउने चर्चा सेलाएको छ । नेयमार बार्सिलोनामा फर्किने विषयमा सबैको चासो थियो । न्युज पोर्टलदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय रहेका नेयमार अन्ततः पीएसजीमा नै बस्ने भएका छन् ।
खासमा नेयमार स्पेनमा नै जान चाहन्थे । ला लिगाको जुनसुकै साइडमा भए पनि जानुपर्ने कुरा गरिएको थियो । उनले न त बार्सा भन्न सके न त अरु नै । नेयमार सम्झौता हुने आशमा बसिरहे तर अन्त्यमा उनी मूर्खजस्तो देखिए । के बार्सिलोना नेयमारलाई चाहन्थ्यो ? यदि चाहन्थ्यो भने फ्राङक डी योङलाई किन अयाक्सबाट ल्यायो ? किन ग्रिजमानलाई अनुबन्ध गर्यो ? यस्ता खालका घटनाहरु हेर्दा थाहा हुन्छ कि बार्सिलोना नेयमारलाई भित्र्याउन त्यति बल गरेको थिएन ।
धेरै पटक नेयमार भित्र्याउने सम्झौता सफल भएजस्तो अवस्था आए पनि सफल भने हुन सकेन । अब बार्सिलोनाले भन्नेछ, “हामी थाकिसकेका छौँ । जो जसले नेयमार बार्सिलोनामा नफर्किउन् भन्ने चाहन्छन् उनीहरु खुशी हुनेछन् ।” बार्सिलोना पहिले नै ६०० मिलियन यूरो ऋणको बोझमा छ । यदि बार्सिलोनाले नेयमारलाई चाहन्थ्यो भने कुनै न कुनै हालतमा नेयमारलाई क्लबमा भित्र्याएरै छाड्थ्यो । नेयमारको बार्सिलोनामा फर्किने सपना पूरा नभए पनि पीएसजीमा उनको कुनै खेलाडीसँग त्यति नराम्रो सम्बन्ध पनि छैन । पीएसजीका प्रशिक्षक टुचेलसित उनको राम्रो सम्बन्ध छ ।